Moussa Faki ''Waxaa maanta beenoobay xumaha laga faafin jiray Somalia'' - Caasimada Online
Home Warar Moussa Faki ”Waxaa maanta beenoobay xumaha laga faafin jiray Somalia”
Moussa Faki ”Waxaa maanta beenoobay xumaha laga faafin jiray Somalia”
Muqdisho (Caasimada Online)-Sida aan horayba u sheegnay waxaa goordhow magaalada Muqdisho kasoo dagay Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki.
Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki, ayaa markii uu kasoo degay Garoonka Aadan Cadde kullan la qaatay madaxda dowlada federaalka Somalia.
Moussa Faki Mahamat waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey Ra’isul wasaaraha Somalia Xasan Cali Kheyre iyo xubno ka socday AMISOM.
Booqashada Guddoomiyaha ayaa ah mid loogu kuurgalayo xaaladda abaarta iyo saameynta ay yeelatey, hawgalka AMISOM iyo sidii AU ay uga qayb-qaadan lahayd gar-gaarka Soomaaliya.
Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki, oo la hadlay Warbaahinta ayaa beeniyay wararka sheegaya in Somalia ay daashatay colaado, waxa uuna cadeeyay in Somalia ay ka dhismo qurxoon tahay dhowr dal oo uu ka jiro amni.
Moussa Faki ayaa yiri ”Waxaan maqli jiray ugama jeedo Somalia, waxaan arkaa Somalia oo ka muuqaal qurxoon wadamo farabadan waxaana ii muuqda Somalia oo Soomaalidii hore bedeleysa”
Waxa uu intaa ku daray ”Bilicda Somalia aad ayay u bidhaameysaa waxaan Dowladaha saaxiibada la’ ah Somalia ugu baaqayaa in laga dhabeeyo garab istaaga dhinacyada amniga iyo Abaarta, waan la socnaa in Somalia ay ka jiraan abaaro dhib farabadan geystay”
Midowga Afrika waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka badan 20 000 oo askeri, waxaana horey loo go’aamiyey in ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadka 2018 oo ay ka harsan tahay wax yar.